I-Holidayin Yurt Camp bu Issik-Kyl - I-Airbnb
I-Holidayin Yurt Camp bu Issik-Kyl
Inkampu yethu yeeyurt ekunxweme lwechibi elisezintabeni i-Issyk-Kul. Kufuphi nelali yaseBokonbaev. Ukusuka kwilali yaseBokonbaev kwicala laseKarakol phambi kwelali iTon kukho ukujikela ngasekhohlo. Ukuba uya phambili kancinci, uya kubona uphawu lwethu "ALMALUU"
Ukusukela ngo-2015, siyakwamkela iindwendwe kungekuphela nje ehlotyeni kodwa nasebusika.
Sithetha isiRashiya, isiNgesi nesiJamani.
Uhambo lweeHolide zaseKyrgyzstan
IHolide kwilali yaseyurt, uhlala njengabahambi kwiyurt yokwenyani yaseKyrgyz!
I-A yurt likhaya loonothwal' impahlana abakuMbindi weAsia. Enye yeempawu zayo ezikhethekileyo yimilo yayo engqukuva, engaboneleli kuphela ukuxhathisa umoya kodwa kwakhona, uxolo nokhuseleko.
Amalungu enziwe ngokukodwa kwizinto ezisemgangathweni zendalo ekrwada. Izinto ezisisiseko ngumthi: i-concertina, i-soffit kunye neepali zophahla zenziwe ngamaplanga.
Umgangatho ufana nje neendonga zeyurt kunye nophahla, ukhuselwe ngokuziva njengoko kwisithethe sakudala. Ucango lweyurt lugqunywe ngokuziva kwaye luhonjiswe ngemihombiso eqhelekileyo yaseKyrgyz. Iiyurts zixhotywe ngobugcisa boqobo baseKyrgyz. Akukho bhedi, oomatrasi kuphela,
akukho zitulo, ukukhwelana nje, ukuze uphile nje ngoonothwal’ impahlana. Ukuze ulale kwaye uhlale kuya kuba noomandlalo bokulala kunye nokuhlala ngokwaneleyo.
Ilali ye-yurt kwilali yaseBokonbaev ibekwe kufutshane ne-Issyk-Kul Lake. I-Issyk-Kul lichibi lesibini ngobukhulu ehlabathini. Ime kwi-1600 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye yi-182 km ubude kunye ne-668 yeenyawo ubunzulu. Amanzi anetyuwa kancinane kwaye akabi ngumkhenkce ebusika. Ichibi lijikelezwe macala onke ukuya kuthi ga kwiintaba eziphakamileyo ezingama-5000Meter.